Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa ku booriyey in ay ka qeyb qaataan horumarinta dowladnimada+(SAWIRRO). | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid...
Madaxweynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa ku booriyey in ay ka qeyb qaataan horumarinta dowladnimada+(SAWIRRO).
Ilyaas Axmed Cilmi
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay doorkooda ku aaddan dib u dhiska dalka, adkeynta dowladnimada, hoggaaminta iyo horumarinta bulshada.
Madaxweynaha oo ka jawaabay weydiimaha dhallinyaradii kulanka ka soo qeyb galay ayaa tilmaamay in dhallinyaro badan oo ku xirnaa Xabsiyo shisheeye ay dowladdu dib ugu soo celisay dalka, kuwaas oo haatan sharaf iyo karaamo ugu nool dalkooda, qeybna ka ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee u taagan in ay mustaqbal wanaagsan u horseedaan dalka iyo dadka.
“Dhallinyarada Soomaaliyeed waa cududda dalkeenna. Waa waajib Qaran in lagu dhiirri geliyo ka miro dhalinta hiigsigooda iyo dadaalkooda ku aaddan dib u dhiska dalka. Dowladda aan hoggaaminayo waxaa ka go’an xaqiijinta kaalinta dhalliyarada ee siyaasadda, arrimaha bulshada, difaaca dalka iyo dhaqaalaha”
Madaxweynaha ayaa dhallinyarada la wadaagay dadaalka dowladdu ay ku bixisay awoodsiinta dhallinyarada ee hoggaaminta hay’adaha dowladda iyo Ciidamada Qalabka Sida, taas oo lagu xaqiijinayo qorsheyaasha ku qotoma xaqiijinta dowlad Soomaliyeed oo horumarsan, ilaalisana madax-bannaanideeda iyo Sharafka shacabkenna.
Dhankooda dhallinyarada goob joogga ku ahaa kulanka, ayaa Madaxweynaha uga mahadceliyay mudnaanta uu siiyey dhallinyarada iyo kalsoonida uu ku qabo awooddooda hoggaamineed, waxa ayna soo bandhigeen sida ay uga go’an tahay mideynta cududda dhallinyarada oo ah awoodda ugu badan ee bulshada, si looga miro dhaliyo qorsheyaasha la dagaallanka qabyaaladda iyo musuqmaasuqa.
Previous articleSafiirka Dowlada Talyaaniga u fadhiyo Soomaaliya oo maanta gaaray magaalada Hobyo+(SAWIRRO).
Next articleRa’isul wasaaraha Itoobiya oo soo saaray qoraal uu uga hadlaayo xaalada ka taagan dalkaasi.
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo u safray dalka UK
Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub oo war kasoo saaray dhacdooyinka ka socda Tuunis
Sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya qeybta Galmudug oo ka digay ciidanku siyaasadda ku milmo
Ra’iisul Wasaare Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo oo u safray dalka...
Qaramada Midoobey iyo Midowga Yurub oo war kasoo saaray dhacdooyinka ka...
Sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya qeybta Galmudug oo ka digay ciidanku...